Iindaba -U-Shandong Gaoqiang unikele ngemali yokufunda
"Enkosi kuMphathi Jikelele uZhu, enkosi kuShandong Gaoqiang, sizakufunda ngokuzimisela emva kokungena eyunivesithi kwaye sibuyisele uluntu ...", "Enkosi Mphathi uZhu, enkosi inkampani ngokusinceda kwiprojekthi yokukhanyisa kwiilali zeJijianpeng .. ., umbulelo onyanisekileyo awunakuyeka ukuva.
Umsitho womnikelo ububanjelwe kwiKomiti yeelali zeJijianpeng kwiPingyi County nge-26 ka-Agasti. Umnumzana Zhu Mengshou, umphathi jikelele weShandong Gaoqiang New Material Technology Co., LTD unikezele ngezixhobo zokukhanyisa kunye nezixhobo kubafundi abahluphekayo abahlanu naseJijianpeng kwiPingyi County. Ngaphezulu kweshumi labantu abezimase umsitho wokunikela ngemisebenzi yentlalontle yoluntu, kubandakanya uZhang Guanlin, usekela unobhala wekomiti yamaKomanisi e-Pingyi County, uJiao Dale, unobhala weKomiti yeQela lePingyi County, uJi Dayong, unobhala wokuqala we-Jiujianpeng, kunye UMeng Ding, usekela-Nobhala we-Jiujianpeng.
Kwindawo yomnikelo, uGM Zhu wanika i-4, i-yuan engama-4 000 kubafundi abahlanu abahluphekileyo ababeza kungena eyunivesithi. Wanxibelelana nabafundi abahluphekileyo, enolwazi olunzulu ngokufunda kwabo kunye nobomi babo, wabelana ngamava akhe okukhula kunye nabafundi, wabafundisa ukuba basoloko benombulelo ngezinto abazifundileyo kwaye babuyisele idolophu yabo kunye noluntu ngezenzo ezenziwayo.
Kwangelo xesha, emva kokufunda imeko yezoqoqosho kwilali yaseJijianpeng kwincoko nonobhala uJi, uManejala uZhu ubonelele ngenkxaso-mali ye-10,000 yezezimali yezixhobo zokukhanyisa elalini. Umlawuli welali i-Jiujianpeng u-Liu Yuefeng ubulele u-GM zhu ngale ntshukumo yothando, kwaye wakhupha isatifikethi sembeko ku-Zhu, isixeko sathumela unobhala wokuqala wonobhala wonyaka owanikezela ngophawu lweshishini lothando luka-Zhu.
Ekupheleni kwalo msitho, uMphathi Jikelele uZhu uthe: Ukusukela oko yasekwa phantse kwiminyaka eli-10 eyadlulayo, inkampani yaseGao Qiang ibibambelele kwingcinga ethi "ukuthembeka, ukusebenza nzima". Ngelixa kufezekiswa uphuhliso lwezoqoqosho lwenkampani, ibambelela kakhulu ekubuyiseleni uluntu, ixhasa ngokubonakalayo isizathu sokukhathalela isizukulwana esilandelayo, kwaye icwangcise ukwenza imisebenzi yezentlalontle yoluntu minyaka le kwixa elizayo. Kwangelo xesha, ikwafuna oosomashishini abaninzi kunye nabantu abakhathalelayo ekuhlaleni ukuba bathathe inxaxheba kwimisebenzi yentlalontle yoluntu
U-Shandong Gaoqiang akasoze ayilibale injongo yoqobo, gcina i-mission engqondweni, uqhubeke nokuthatha inxaxheba kwizithembiso zentlalontle yoluntu, uncede abantu abaninzi abafuna uncedo, badlulise uthando, baqhubeke nokubhala intliziyo enkulu, banegalelo kwisahluko esitsha uluntu!